Baan Kii Muun oo dib loogu doortay xoghayaha guud ee QM – SBC
Baan Kii Muun oo dib loogu doortay xoghayaha guud ee QM
New York:- Jamciyadda guud ee QM ayaa dib ugu dooratay Mr Baan kii Muun oo ah nin u dhashay kuuriyada koonfureed in uu markale dib u qabto xilka xogahayaha guud ee QM shanta sano ee soo socota.
Baan Kii Muun ayaanan cidna kula tartamin jagada kadibna u suurtagashay in uu helo codadka 192 dowladood oo 15 kamid ah ay yihiin xubnaha golaha amaanka.
Baan Kii Muun ayaa sacab balaaran kala kulmay dublumaasiyiintii ku sugnayd fadhiga.
Safiirka dalka Gaaboon ahna madaxweynaha golaha amaanka ninka lagu magcaabo Nelson Meson ayaa sheegay in xoghayaha guud ee QM uu ku shaqeeyey hufnaan iyo madaxbanaani si qaaradaha adduunka uu ugu soo dabaalo nabad gelyo , amni iyo cadaalad.
Dadka dhaliila Baan Kii Muun ayaa ku tilmaama in uu yahay nin u dhaga nugul rabitaanka dowladaha waa weyn, balse waxa uu amaan ku muteestay go’aanadiisa arrimo muhiim ah sida isbedelka cimilada.
Sidoo kale Mr Muun ayaa muujiyey taageerada uu u hayo kacdoonada ka socda dalalka carabta , wuxuuna cambaareeyey Madaxweyne Bashaar Al-asad ilaa heer uu gaaray in uusan kala haladlin dhanka Telefanka.
Baan Kii Muun ayaa loo doortay xilka xoghayaha guud ee QM sanadkii 2007 , isagoo badaly Koofi Anaan oo u dhashay dalka Ghana ee qaaradda Africa.
Mr Muun ayaa u ololeeyey 2006 in uu qabto xilka Xoghayaha guud ee QM isagoo balan qaaday inuu dib u hagaajin ku sameyn doono haykalka ama qaab dhismeedka QM.
Mr Muun ayaa sheegay in uu ku riyooday markii ugu horeesay in uu noqdo dublumaasi markii uu la kulmay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka John Kennedy sanaddii 1962.
Mr Buun oo ay mar labaad uga bilaaban doonto sii wadida xilka xoghayaha guud ee QM bisha January 2012 ayaa waxa uu xilka ka dhamaan doonaa 31 December 2016.
Kooxaha xuquuqul Insaanka ayaa ku dhaliila Mr Muun in uu ku fashilmay in uu talaabo adag ka qaato dowlada China xilligii ay xirtay qoraaga mucaaradka Liyuu Shaybaaw ee haysta abaal marinta nabadda ee Nobel ama Nobel Peace Prize.